Masibuyele ku-Epreli 2020. Ngelo xesha, ubhubhani wayesandula ukuqala phesheya, kwaye abantu babanjiswa emakhaya bengenanto yokwenza. Kwaye abadlali betafile abaphumli. Njengoko sonke sisazi, iitafile zabadlala iidubhu ezinkulu ezenza iimephu zazo zomdlalo, iibhokisi zokugcina kunye neetafile zomdlalo ezinikezelweyo. Kwaye ...
Utata onomntwana usenokukhupha "umdlalo webhodi yebhodi"
Wakhe wambona utata onakekela umntwana? Ezingqondweni zabantu abaninzi, ootata babakhathalele abantwana babo = "abangenankathalo". Kodwa eHuddersfield, e-UK, kukho utata onjalo, kwinkqubo yokugcina abantwana bakhe kungekuphela nje okuhle, kwaye ngendlela, uyile nebhodi g ...
Umenzi we Kylin ngumenzi webhodi yomdlalo owamkela ukuthengisa kunye nokwenza ngokwezifiso
Umenzi we-Kylin uyeyona nkonzo ilungileyo sinokuyilungiselela wena, naluphi na uyilo kunye nokubonelela ngexabiso lemveliso. Siyakholelwa ukuba unxibelelwano oluyimpumelelo phakathi kwabavelisi kunye nabaxhasi lusekwe kukuthembeka kunye nokunyaniseka. Ukubambelela ngokungqongqo kulo mthetho-siseko kusivumela ukuba sihlangane rhoqo kwaye sidlule o ...
I-Kylin manufactory ngumvelisi webhodi yezemidlalo
I-Kylin manufactory ngumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthumeli ngaphandle womdlalo webhodi, imidlalo yamakhadi, amakhadi okudlala, izinto zomdlalo, iiposta zobugcisa zevelvet, ibhokisi yokupakisha kunye nezinto zoncedo. Sisebenzisa iifektri ezine zemveliso kubandakanya; ushicilelo, iinkuni, ingqekembe kunye neplastiki. Sisebenzisana ngaphezu kwama-10 iindawo umdlalo pr ...
Amalaphu Umdlalo weBhodi, Ikhadi lemikhono, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Idayisi yesiNtu,